Sina Inona no tokony hataontsika amin'ireo mpamatsy COVID 19 | Guanglei
Home Air hanadio
Small Air hanadio
Car Air hanadio
Inona no tokony hataontsika manoloana ny COVID 19
Fantatsika rehetra fa ny olona eran'izao tontolo izao dia hanao vaksiny amin'ny COVID 19. Midika ve izany fa azo antoka isika amin'ny ho avy? Raha ny marina dia tsy misy afaka mahazo antoka fa rehefa afaka miasa isika ary mivoaka malalaka. Mbola hitantsika fa misy fotoan-tsarotra eo alohantsika ary mila manamarika isika hiarovantsika tena ao an-trano sy any ivelany.
Inona no tokony hataontsika izao?
1. Makà vaksinin'ny COVID-19 raha vantany vao azonao atao. Mba hamandrihana ny fotoana fanendrena vaksiny COVID-19 anao dia tsidiho ny serivisy fanomanana fandaharana an-tserasera. Raha manana fanontaniana momba ny fandaharam-potoana fanendrena vakisinao ianao dia mifandraisa mivantana amin'ireo mpanome vaksiny.
2. Manaova sarontava amin'ny tarehy rehefa any ivelany ianao ary mahazo vaksiny. Covid-19 dia tsy hanjavona ao anatin'ny fotoana fohy, hiarovana tsara anao sy ny fianakavianao, ny fanaovana sarontava endrika rehefa mivoaka dia tena ilaina.
3. Ampiasao ao anaty trano ny mpanadio rivotra. Amin'ny maha-toetran'ny taovam-pisefoana azy, ny COVID-19 koa dia miparitaka amin'ny rano mitete. Rehefa mievina na mikohaka ny olona dia mamoaka ranon-javatra mitete any amin'ny rivotra misy rano, moka, ary partit viral. Ny olona sasany avy eo miaina ao anatin'ireny vongan-drano ireny, ary voan'ny virus izany. Ny risika dia avo indrindra amin'ny toerana anaty trano feno olona miaraka amin'ny rivotra marefo. Ity ambany ity dia fanadiovan-drivotra malaza miaraka amin'ny sivana HEPA, anion ary sterilization UV.
1) Ny filtrasiona HEPA dia misambotra tsara ny sombiny mitovy habe amin'ny (sy kely lavitra noho) ny viriosy izay miteraka COVID-19. Miaraka amin'ny fahombiazan'ny 0,01 micron (10 nanometres) ary ambony, ny sivana HEPA, manivana ireo sombin-javatra ao anatin'ny haben'ny 0,01 micron (10 nanometres) sy ambony. Ilay viriosy miteraka COVID -19 dia manodidina ny 0,125 micron (125 nanometres) ny savaivony, izay latsaka tanteraka ao anatin'ny elanelan'ny haben'ny sombin-tsolika azon'ny HEPA sivana amin'ny fahombiazana miavaka.
2) Ny fampiasana sivana ionizing amin'ny fanadiovan-drivotra dia manampy amin'ny fisorohana mahomby ny gripa azo avy amin'ny rivotra. Ny ionizer dia miteraka ionona ratsy, manome ny poti-drivotra / vongan-drano aerosol voadona ratsy ary manintona azy ireo amin'ny takelaka fanangonam-bola. Io fitaovana io dia ahafahana manafoana viriosy haingana sy tsotra amin'ny rivotra ary manome fahafaha-mamantatra sy misoroka ny viriosy avy amin'ny rivotra.
3) Araka ny fikarohana isan-karazany, ny hazavan'ny UVC miparitaka be dia be dia be ary mamono otrikaretina sy bakteria, ary ampiasaina hamoahana ny fandidiana amin'ny fandidiana ankehitriny. Ny fikarohana mitohy dia mampiseho ihany koa fa ny fantsom-panafody UV dia manana fahaizana mandray sy mampihetsika ny viriosy SARS -COV miaraka amin'ny H1N1 sy ireo karazana bakteria sy virus hafa mahazatra.
Izay liana bebe kokoa momba ny fanadiovan-drivotra, tongasoa anay hifandray aminay momba ny antsipiriany sy fihenam-bidy.
Fotoana fandefasana: Apr-23-2021
(Factory) 1st Building, No.15 Dalingbian Road, Shahu Tangxia, Dongguan City, Provinsi Guangdong, Sina.
Home Air hanadio, Mazava ho Manafoana ny Home Air hanadio , Air hanadio Fa Home Atohofy betsaka, Best Home Air hanadio Uk , Ozone Air Purifier Home Depot , UV Home Air hanadio , rehetra Products